Iikuki 🥇 I-Emulator.online ▷ 🥇
I-LSSI-CE ifuna ukuba sonke sinebhlog okanye iwebhusayithi yethu lumkisa umsebenzisi ngobukho becookies, yazisa malunga nabo kwaye ufune imvume yokukhuphela.
Inqaku 22.2 yoMthetho 34 / 2002. "Ababoneleli beenkonzo banokusebenzisa ukugcinwa kwedatha kunye nezixhobo zokubuyisa izixhobo ezikwisiphelo sesixhobo sabamkeli, ngaphandle kokuba Banike imvume yabo emva kokuba benikwe ulwazi olucacileyo nolugqibeleleyo malunga nokusetyenziswa kwabo, ngakumbi, ngeenjongo zokulungiswa kwedatha, ngokungqinelana nemigqaliselo yoMthetho weOrganic 15 / 1999, kaDisemba 13, kuKhuseleko lweDatha yoBuntu ”.
Njengomntu ophethe le webhusayithi, ndizamile ukuthobela ubungqongqo ngenqaku lama-22.2 loMthetho 34/2002 kwiiNkonzo zoMbutho woLwazi kunye noRhwebo lwe-Elektroniki ngokubhekisele kwicookies, nangona kunjalo, kuthathelwa ingqalelo indlela Umsebenzi we-Intanethi kunye neewebhusayithi, akusoloko kunokwenzeka ukuba ube nolwazi oluhlaziyiweyo kwii-cookies ezinokusetyenziswa ngumntu wesithathu kule webhusayithi.
Oku kusebenza ikakhulu kwiimeko apho eli phepha lewebhu linezinto ezihlanganisiweyo: oko kukuthi, izicatshulwa, amaxwebhu, imifanekiso okanye iifilimu ezimfutshane ezigcinwe kwenye indawo, kodwa zibonisiwe kwiwebhusayithi yethu.
Ke ngoko, ukuba ufumanisa olu hlobo lweicookies kule webhusayithi kwaye azidweliswanga kolu luhlu lulandelayo, nceda undazise. Unganxibelelana ngqo nomntu wesithathu ukuba ucele ulwazi malunga neicookies ozibekayo, injongo kunye nobude becookie, kunye nendlela eqinisekisa ngayo ubumfihlo bakho.
Iicookies ezisetyenziswa yile webhusayithi
Iicookies zisetyenziswa kule webhusayithi Okwesibini kunye nomntu wesithathu Ukufumana amava okuphequlula angcono, unokwabelana ngomxholo kwinethiwekhi yoluntu, ukukubonisa iintengiso ezisekwe kwiminqweno yakho kunye nokufumana iinkcukacha-manani zabasebenzisi.
Njengomsebenzisi, unokwala ukuqhubekeka kwedatha okanye ulwazi ngokuvimba ezi kuki ngokuseta ngokufanelekileyo isikhangeli sakho. Nangona kunjalo, kuya kufuneka uyazi ukuba, ukuba uyenzile, le ndawo ayisebenzi ngokufanelekileyo.
Ngaphantsi kwemigaqo ebandakanyiwe kwiNqaku 22.2 yoMthetho 34 / 2002 yeeNkonzo zoMbutho woLwazi kunye neNtengiso ye-Elektroniki, ukuba uyaqhubeka nokubrawuza, uya kunika imvume yakho yokusebenzisa iicokies endizicacisa apha ngezantsi.
Iicookies kule webhusayithi zinceda:
Yenza le webhusayithi isebenze ngokuchanekileyo
Gcina ukuba ungene ngalo lonke ixesha undwendwela le ndawo
Khumbula iisetingi zakho ngexesha naphakathi kokutyelelo
Vumela ukuba ubukele iividiyo
Ukuphucula isantya / ukhuseleko lwesiza
Ukuba ungabelana ngamaphepha kwiinethiwekhi zentlalo
Qhubeka nokuphucula le webhusayithi
Ndikubonise iintengiso ezihambelana nendlela yakho yokukhangela
Andisoze ndisebenzise ikuki kwi:
Qokelela ulwazi oluchaziweyo (ngaphandle kwemvume yakho ebonakalayo)
Qokelela ulwazi olubuthathaka (ngaphandle kwemvume yakho ebonakalayo)
Yabelana ngeenkcukacha zesazisi kumntu wesithathu
Iikuki zomntu wesithathu esizisebenzisa kule webhusayithi kwaye kufuneka uyazi
Le webhusayithi, njengoninzi lwewebhu, ibandakanya izinto ezibonelelwe ngabantu besithathu.
Uyilo olutsha okanye iinkonzo zomntu wesithathu nazo zivavanywa rhoqo kwiingcebiso kunye neengxelo. Ngamanye amaxesha kunokutshintsha useto lwecookie kwaye iikuki ezingacaciswanga kulo mgaqo-nkqubo ziyavela. Kubalulekile ukuba uyazi ukuba zii-cookies zethutyana ekungasoloko kunokwenzeka ukuba zixelwe kwaye zineenjongo zokufunda kunye nokuvavanya kuphela. Akunakho ukuba iikuki ezibeka esichengeni imfihlo yakho zingasetyenziswa.
Phakathi kweekuki zecandelo lesithathu ezizinzileyo zezi:
Ezo zinto zenziwa ziinkonzo zohlalutyo, ngokuthe ngqo, Uhlalutyo lukaGoogle ukunceda iwebhusayithi ukuhlalutya usetyenziso olwenziwe ngabasebenzisi bewebhusayithi kunye nokuphucula ukusebenza kwayo, kodwa akukho meko banxulumana nedatha enokuchonga umsebenzisi.
UGoogle Analytics yinkonzo yohlalutyo lwewebhu ebonelelwa yiGoogle, Inc., inkampani yeDelaware eneofisi ephambili kwi1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, United States ("Google").
Umsebenzisi angadibana nohlobo lweicookies ezisetyenziswa nguGoogle, uGoogle + Cookie kunye neMephu zikaGoogle, ngokwemigaqo ekwiphepha labo malunga nohlobo lweekuki abazisebenzisayo.
Ukulandela umkhondo kweGoogle Adwords: Sisebenzisa umkhondo wokuguqula umkhondo kuGoogle AdWords. Ukulandela umkhondo woguqulo sisixhobo sasimahla esibonisa okwenzekayo emva Nokuba umthengi ucofa kwiintengiso zakho, nokuba uthenge imveliso okanye ubhalisile kwincwadana yakho. Ezi khukhi ziphelelwa lixesha emva kweentsuku ezingama-30 kwaye azinalo ulwazi olunokukuchonga.
Ngolwazi oluthe kratya malunga nokulandela umkhondo Ukuguqulwa kukaGoogle nomgaqo-nkqubo wabucala.
Ukumaketha kukaGoogle AdWords: Sisebenzisa ukuThengisa kukaGoogle kuAdwords esebenzisa ikuki ukusinceda ukuhambisa iintengiso ezijolise kwi-intanethi ngokusekwe kutyelelo lwethu lwangaphambili kwiwebhusayithi yethu. UGoogle usebenzisa olu lwazi ukubonisa iintengiso kwiiwebhusayithi zomntu wesithathu kwi-Intanethi. Ezi khukhi sele ziza kuphelelwa kwaye azinalo ulwazi olunokuchonga. Nceda uye kwi Isaziso sabucala sikaGoogle sentengiso ngolwazi oluthe kratya.
Intengiso eveliswa ngabakwa-AdWords, esekwe kwimidla yomsebenzisi, iyaveliswa kwaye iboniswe kulwazi oluqokelelwe kwimisebenzi kunye nokuhamba okwenziwa ngumsebenzisi kwezinye iiwebhusayithi, ukusetyenziswa kwezixhobo, usetyenziso okanye isoftware enxulumene noko, ukusebenzisana ezinye izixhobo zikaGoogle (iiCookC zeCloudClick).
I-DoubleClick isebenzisa ikuki ukuphucula intengiso. Iikuki zihlala zisetyenziselwa ukujolisa intengiso esekwe kumxholo ofanelekileyo kumsebenzisi, ukuphucula iingxelo zomsebenzi kunye nokuphepha ukubonisa iintengiso esele zibonwe ngumsebenzisi.
I-DoubleClick isebenzisa ii-cookie ID ukuze ugcine umkhondo wokuba zeziphi iintengiso ziboniswe kubapheqululazi abathile. Ngexesha lokuposa intengiso kwisiphequluli, i-DoubleClick inokusebenzisa i-cookie ID yesikhangeli ukukhangela ukuba zeziphi iintengiso ze-DoubleClick esele zibonisiwe kweso sikhangeli. Le yindlela i-DoubleClick ekuphepha ngayo ukubonisa iintengiso esele zibonwe ngumsebenzisi. Kwangokunjalo, ii-ID ze-cookie zivumela i-DoubleClick ukurekhoda uguquko olunxulumene nezicelo zentengiso, njengaxa umsebenzisi ebona intengiso ye-DoubleClick kwaye, kamva, isebenzisa isikhangeli esifanayo ukutyelela iwebhusayithi yomthengisi kunye nokuthenga .
I-cookies ze-DoubleClick azinalo ulwazi oluchaziweyo. Ngamanye amaxesha ikuki iqulathe isikhombi esongeziweyo esibonakalayo kwinkangeleko yesazizi. Esi sikhombi sisetyenziselwa ukuqaphela umkhankaso wentengiso oboniswe umsebenzisi ngaphambili.; Nangona kunjalo, i-DoubleClick ayigcini naluphi na olunye uhlobo lwedatha kwikuki kwaye, nangaphezulu, ulwazi aluchazwanga ngokobuqu.
Njengomsebenzisi we-Intanethi, nangaliphi na ixesha uya kuba nako ukucima ulwazi olunxulumene nemikhwa yakho yokukhangela, kunye neprofayli enxulumene nayo eye yavelisa imikhwa ethunyelweyo, ukufikelela ngokuthe ngqo kunye nokusimahla: https://www.google.com/settings/ads/preferences?hl=es . Ukuba umsebenzisi ukhubaza lo msebenzi, i-IDC yekhukhi eyahlukileyo kwi-browser yomsebenzisi ibhangisiwe kwakhona nge "OPT_OUT" isigaba. Ngenxa yokuba i-ID yekhukhi eyahlukileyo ayisasebenzi, ikuki enesiphene ayinakho ukunxulumana nesikhangeli esithile.
WordPress: es ngumsebenzisi webhlog yeWordPress yokubonelela kunye neqonga lokusingatha, eliphethwe yinkampani yaseMntla Melika i-Automattic, Inc. ngeenjongo ezinjalo, ukusetyenziswa kweicookies ezinjalo ziinkqubo aziphantsi kolawulo okanye ukulawulwa komntu onoxanduva lwewebhu, banokuthi utshintshe ukusebenza kwawo nanini na, kwaye ufake ii-cookies ezintsha.
Ezi kuki azichazi naliphi na izibonelelo kumntu onoxanduva kule webhusayithi. I-Automattic, Inc., isebenzisa ezinye iicookies ukunceda ekuboneni nasekulandeleleni iindwendwe kwiisayithi zeWordPress, zifunde ngokusetyenziswa kwazo iwebhusayithi yeAutat, kunye nokukhetha ukufikelela kwazo, njengoko uqokelelwe kwicandelo "leKuki" lakho umgaqo-nkqubo.
Iqonga levidiyo njengeYouTube liyasetyenziswa
Unxibelelwano lweeNkonzo zamaQonga (Bafaka iicookies zokukhangela umkhondo wentengiso ovela kule webhusayithi):
IAmazon.com kunye .es: I-Ireland.
Iikuki zenethiwekhi yoluntu: Iikuki ezisuka kwiinethiwekhi zentlalo zingagcinwa kwisikhangeli sakho ngelixa ubrawuza iileta ze-coogle.com umzekelo, xa usebenzisa iqhosha lokwabelana ngemixholo yeengoma ze-instagram.com kwinethiwekhi yoluntu.
Iinkampani ezivelisa ezi kuki zihambelana nothungelwano loluntu ezisebenzisa le webhusayithi zineenkqubo zazo zokupheka:
I-Linkedin cookie, njengoko inikiwe kweyakho UMgaqo-nkqubo weKuki
Ikhukhi ye-Facebook, njengoko inikezwe kweyakho Ikhukhi nkqubo
Iziphumo zabucala ziya kuxhomekeka kwinethiwekhi nganye kwaye ziya kuxhomekeka kuseto lwangasese olukhethileyo kwezi nethiwekhi. Kwimeko apho kungekho mntu uxanduva lokujongana nale webhusayithi kunye nabathengisi abanokufumana ulwazi oluqondakalayo malunga nezi kuki.
Okulandelayo, kwaye njengoko kufunwa linqaku 22.2 le-LSSI, iicookies ezinokufakwa rhoqo ngelixa ukhangela le webhusayithi zichaziwe:
NAME IXESHA INJONGO
Own: Sessionmtsnb_referrer mtsnb_seen_2923bp_ut_session__smToken__wps_cookie_1415814194694 _ga _gat Baphelelwa ekupheleni kweseshoni. Bayagcina ulwazi lomsebenzisi kunye neeseshoni zabo ukuphucula amava omsebenzisi.
I-NID __utma, __utmb, __utmc, __utmd, __utmv, __utmz Iminyaka ye-2 ukusuka kumiselo okanye ukuvuselelwa. Bayakuvumela ukuba ulandele i-webhusayithi usebenzisa isixhobo sikaGoogle, isixhobo esibonelelwa nguGoogle ukufumana ulwazi malunga nokufikelela komsebenzisi kwiiwebhusayithi. Ezinye zeenkcukacha ezigcinelwe ukuphononongwa ngakumbi zezi: inani lamaxesha umsebenzisi athe atyelele iwebhusayithi, imihla yotyelelo lokuqala nolokugqibela lomsebenzisi, ixesha lokutyelelwa, iphepha apho umsebenzisi athe wafumana iwebhusayithi , injini yokukhangela esetyenziswe ngumsebenzisi ukufikelela kwiwebhusayithi okanye ikhonkco olikhethileyo, beka emhlabeni apho umsebenzisi angena khona, njl. Ukulungiswa kwezi kuki kuchazwe kwangaphambili yinkonzo enikezelwa yiGoogle, kungoko sicebisa ukuba ujonge Iphepha labucala likaGoogle Ukufumana ulwazi oluthe kratya malunga namakhukhi owasebenzisayo kunye nendlela yokuzikhubaza (ngokuqonda ukuba asiloxanduva kulo mxholo okanye inyani yewebhusayithi zomntu wesithathu)
Kwindlela.com__ga Ekupheleni kweseshoni Eli liqonga lokuthengisa iincwadi zedijithali.
Doubleclick.comDSIS- IDE-IDE Iintsuku ze30 Le cookie isetyenziselwa ukubuyela ekujolise kuyo, ekusebenzeni kakuhle, ekuxeleni nasekwaziseni izibhengezo zentengiso kwi-intanethi. I-DoubleClick ithumela ikuki kwibrawuza emva kwawo nawuphi na umsebenzi wokushicilela, ucofe okanye omnye umsebenzi obangela ukuba ube nomnxeba kwiseva ye-DoubleClick. Ukuba isiphequluli samkela ikuki, igcinwa kuyo. Ulwazi oluninzi
FumanaClicky_jsuid Iintsuku ze30 Ubalo lwezixhobo zeWebhu zokuCofa zisetyenziselwa ukuqokelela amanani obalo lwewebhusayithi. Ulwazi oluqokelelweyo lubandakanya iProtokholi ye-Intanethi (i-IP), uhlobo lwesikhangeli, uMboneleli weNkonzo ye-Intanethi (ISP), umhla / ixesha lesitampu, ukubhekisa / ukungena / amaphepha / ukuhlalutya imikhwa, ukulawula indawo kunye nokuhamba lomsebenzisi ujikeleze indawo. Olunye ulwazi lunokufumaneka kwiphepha lokuCofa imigaqo yabucala .
Tube Iminyaka eyi-2 emva koqwalaselo Isivumela ukuba singene kwiividiyo zeYouTube. Le ndlela inokuseta ikuki kwikhompyuter yakho wakube ucofa kwisidlali sevidiyo seYouTube, kodwa iYouTube ayizukugcina ulwazi lwecookie oluchongiweyo ngokokubona ividiyo efakelweyo usebenzisa indlela eyimfihlo yokuphucula imeko. Ngolwazi oluthe kratya ndwendwela iphepha lokufaka ulwazi YouTube
I-Acumbamail Iminyaka eyi-2 emva koqwalaselo Yimveliso yokuhlawula olunye ulwazi
I-PYPF Inyanga e-1 Iicookies zobugcisa Ukomeleza ukhuseleko ekufikeleleni kwiqonga lokuhlawula ngePayPal. Banokunxibelelana nge sibuyali.com.
Indlela yokulawula kunye nokukhusela iikuki
Ukuba awufuni iiwebhusayithi ukuba zibeke nayiphi na iicookies kwisixhobo sakho, unokuhlengahlengisa useto lwebrawuza ukuze waziswe ngaphambi kokuba kukhutshelwe iikuki. Ngendlela efanayo, unokuhlengahlengisa ukuhlengahlengiswa ukuze isiphequluli sikhabe zonke iicookies, okanye kuphela ii-cookies zomntu wesithathu. Unokucima nayiphi na iicookies esele zikho kwikhompyuter yakho. Gcina ukhumbula ukuba kuya kufuneka uhlengahlengise ubumbano lwebrawuza nganye kunye nezixhobo ozisebenzisa ngokwahlukeneyo.
ulwazi (e) lokubaleka kwigumbi lokukhupha.online lenza ukuba abasebenzisi bafune ukuthintela ukufakwa kweicookies esele zikhankanywe ngasentla, amakhonkco anikezwe le nto ngabaphequlululi abasebenzisa kakhulu njengento ebanzi:
Umgaqo-nkqubo wecookies ugcine ukuvuselelwa nge-20/05/2020